Booliska Puntland oo war ka soo saaray ammaank amagaalada Garowe. – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska Puntland oo war ka soo saaray ammaank amagaalada Garowe.
Star FM December 16, 2018
Ayadoo sanadka cusub la qorshaynayo in doorashada madaxweynuhu ay ka dhacdo deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaay saraakiisha boolisku waxay kulamo dhanka amaanka ah la qaateen hogaanka Bulshada magaalada Garowe waxayna kala hadleen sidii amaanka loo adkayn lahaa.
Taliska ciidanka Booliska magaalada Garowe ayaa warbahainta u sheegay in waxgaradkii ay la kulmeen ay kala hadleen sidii shacabka magaaladaasi ay ula shaqayn lahaayeen ciidamada amaanka si wada jir ahna looga hortagi lahaa falalka amaanka lidiga ku ah.
Wuxuu intaasi raaciyay in kulankaan uu qayb ka ahaa dadaalada lagu doonayo in amaanka si weyn loo adkeeyo xiliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha Puntland, ku xigeenkiisa,gudoonka baarlamaanka Puntlan iyo ku xigeenadiisa oo dhamaantood ay ka dhici doonaan magaalada Garowe.
Magaalada garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa isu diyaarinaysa doorashada madaxda maamulka Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8 bisha janaayo ee bilowda sanadka soo socda.
Musharaxiin fara badan oo xil doon ah ayaa horay magaalada garowe ula galay ciidamo fara badan iyo gaadiid dagaal maamulka Puntland ayaana horay uga digay in ciidamo iyo gaadiid dagaal lala galo magaalada garowe wixii amniga quseeyana ay ka shaqaynayaan ciidanka amaanka ee magaaladaas ku sugan.
← Dad rayid ah oo duqeeymo lagu dilay dalka Afgaanistaan
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in loo diiday xildhibaano soo booqanaya. →